Shirkada Dahabshiil oo Gurmadkii Abaaraha ee Gedo gaarsiisay deeq lacageed - Wargane News
Home Somali News Shirkada Dahabshiil oo Gurmadkii Abaaraha ee Gedo gaarsiisay deeq lacageed
Shirkadda Dahabshiil ayaa noqotay ganacsatadii ugu horraysay ee ka jawaabtay baaqii gudiga Abaaraha ee Gedo, iyadoo ugu deeqday lacag dhan $ 50,000 konton kun dollar.
Sida ay odayaasha deegaanku u sheegeen Jowhar.com isla markaasna ay uga mahad celiyeen shirkaddan oo mar walba shacabka Soomaliyeed la qaybsata dhibta, sida Fatahaadda wabiyada, abaaraha, xanuunada dilaaga gurmadkooda, isla markaasna waxay gacan ka geystaan dhinaca horumarinta bulshada sida dhiska isbitaalada, Iskuulada.
Deegaanada Gobolka Gedo ee abaaruhu ku dhifteen ayaa mudooyinkii u dambeeyay laga soo sheegayay xaalado bani’aadanimo, iyadoo ay u dheer tahay biyo la’aan, dad dhowr ah ayaa u geeriyooday haraad.
Gudiga Abaaraha ee Gobolka Gedo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iyo jaaliyadaha dibada inay ka qeyb qaataan gurmadkan loo fidinayo dadka ku dhaqan deegaanada Gedo ee ay abaaruhu saameeyeen
Tallaabadan ay qaaday Shirkada Dahabshiil ayaa laga rabaa in Ganacsatada kalena ay u naxaan shacabkooda, oo gacan dhaqso ah u fidiyaan ummadda gaajada iyo oonka ugu dhamaanaysa gobolada abaaruhu aafeeyeen oo ay ugu daran tahay Gobolka Gedo.
Aguero oo ku taageeray Harry Kane u dhaqaaqida Real Madrid